उपाधि दाबेदारमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलको प्रिमियर लिगमा आज ‘महाभिडन्त’ हुँदै ! – tvNepali.net
उपाधि दाबेदारमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलको प्रिमियर लिगमा आज ‘महाभिडन्त’ हुँदै !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति एक रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ । जहाँ यो सिजन उपाधि दौडमा रहेको लिभरपुल र साबिक विजेतासमेत रहेको म्यानचेस्टर सिटी आमनेसामने हुँदैछन् । हाल अंक तालिकामा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा छ भने सिटी तेस्रो स्थानमा छ ।
आजको खेलका लागि सिटीले लिग लिडर लिभरपुललाई आफ्नो घर इत्तेहाद स्टेडियममा स्वागत गर्दैछ । यो खेल राति १ः४५ बजेबाट सुरु हुँदैछ ।
उपाधि दाबेदार यी दुई टोलीको यो खेलको नतिजापछि उपाधि होडको आकार देखिनेछ । खेलमा स्पष्ट हार–जित भए उपाधि होड कसको पक्षमा जाने भन्ने अनुमान गर्न सकिनेछ ।
यो सिजन हालसम्म अपराजित रहेको लिभरपुल अहिले उच्च लयमा छ । उसलाई यसपटक प्रमुख उपाधि दाबेदार टोली मानिएको छ । ऊ यसपटक २९ वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने योजनामा रहेको छ ।
खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले लिभरपुलविरुद्ध खेल्न निकै कठिन हुने बताएका छन । तर, उनले आफूहरू घरमा जित्नकै लागि खेल्ने उनले बताए ।
‘यो खेल हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । लिभरपुलभन्दा ७ अंकले पछि रहेकाले हाम्रा लागि यो अंक दूरी घटाउने मौका हो,’ उनले भने ।
ग्वार्डिओलाले यो खेलमा हारे आफूहरू उपाधि होडमा निकै कमजोर हुने बताए । ‘हामी आफ्नो उत्कृष्ट फुटबल खेल्ने छौं । अन्तिम समयसम्म पनि हामी जितका लागि लड्ने छौं,’ ग्वार्डिओलाले भने ।
त्यसैगरी, लिभपुरलका प्रशिक्षक जोर्गेन क्लोपले पनि सिटीविरुद्धको खेल कठिन हुने बताएका छन् । उनले सिटी बलियो टोली रहेको बताए । ‘हामीलाई सिटीविरुद्ध उसकै घरमा खेल्न अवश्य पनि सहज हुनेछैन,’ क्लोपले भने, ‘तर, हामी यो खेल जितेर उपाधितर्फ अघि बढ्न चाहन्छौं ।’
आजको खेलमा सिटीको टोलीमा इल्के गुन्डोगन एक खेल गुमाएर मैदान फर्किंदैछन् । यस्तै केभिन डी ब्रुयान पनि टोलीमा पर्ने सम्भावना छ । तर, आज सिटीको टोलीमा फाबियन डेल्फा रहने छैनन् । उनी प्रतिबन्धमा हुनेछन् ।
यता, लिभरपुलका लागि स्टार मिडफिल्डर जेम्स मिल्नर २ खेलपछि आज मैदान फर्किंदैछन् । यसअघि चोट बोकेका उनले २ खेल गुमाएका थिए । लिभरपुलका लागि आजको खेलमा अल्बेर्टो मोरिनो पनि उपलब्ध हुनेछन् भने जोर्डन हेन्र्डसन र बेवी केइटाको साथ पनि टोलीलाई हुनेछ ।
यस्तो छ विगतको तथ्यांक
लिगको साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले गएको सिजन लिभरपुललाई ५–० ले हराएको थियो । यी दुई टोली भिडेका पछिल्ला खेलमा ११ सिटीले ३ खेल बराबरी गर्दा ७ खेल हारेको छ । सिटी र लिभरपुल हालसम्म १ सय ६४ पटक भिडेका छन् ।
जसमा सिटीले ४३ खेलमा बाजी मार्दा ७९ खेल हारेको छ भने ४२ खेल भने बराबरीमा रोकिएका छन् । विगतको तथ्यांक हेर्दा सिटी लिभरपुलसँग कमजोर देखिन्छ ।
जसमा लिभरपुलले अधिकांश खेलमा सिटीलाई उसकै घरमा हराएको छ । लिभरपुलले अवे खेलमा ३१ खेलमा बाजी मार्दा २९ खेल गुमाएको छ । त्यसैगरी, सिटीले आफ्नो घरमा २९ खेल जित्दा ३१ खेल हारेको छ ।
हाल लिगमा लिभरपुल २० खेलबाट ५४ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । २१ खेल खेलेको टोटनह्याम ४८ अंकसहित दोसोमा हुँदा २० खेल खेलेको म्यानचेस्टर सिटी ४७ अंकसहित तेस्रोमा छ । २१ खेल खेलेको चेल्सी ४४ अंकसहित चौथोमा छ ।
आजको खेलमा सिटी पराजित भए उसको उपाधि होड थप संकटमा पर्नेछ । किनभने, आफ्नै घरमा पराजित हुँदा ऊ लिभरपुलभन्दा १० अंकले पछि पर्नेछ । यसो भए लिगका आधाभन्दा बढी खेल सकिएको अवस्थामा १० अंकले पछि कठिन हुन सक्छ ।
हाल सिटी लिभरपुलभन्दा ७ अंकले पछि छ भने दोस्रो स्थानको टोटनह्यामभन्दा १ अंकले पछि रहेको छ ।
इंग्लिस प्रिमियर लिगम्यानचेस्टर सिटीलिभरपुल
PreviousPrevious post:पथरी लायन्सको अध्यक्षमा उमेश खड्काको पदस्थापना
Next Next post:प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज हुने भनिएको संसदको सम्बोधन स्थगित
इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि पीएसजीमाथि लिभरपुलको उत्कृष्ट जित